Satashikhabar.com परिवर्तन सत्तामा जाने भर्याङ् मात्रै भएको छ । - satashikhabar.com
भौगोलिक रूपमा भारत र चीनको सीमास्तम्भस्वरुप अवस्थित रहेकाले समग्र भारतीय राजनीतिमा सिक्किमले महत्वपूर्ण स्थान लिने गरेको छ भने यहाँको जनसंख्या सन्तुलनको कुराले पनि समग्र देशलाई प्रभावित पार्ने गरेको छ । जातीय सामाजिक सन्तुलन, सांस्कृतिक सौहार्द्रता र शान्तिप्रियताले सिक्किमलाई संसारभर चिनाएको छ । तर, यहाँको शान्ति एकप्रकारले मुर्दा शान्तिझैं छ । सिर्जनात्मकता शून्य छ । श्रमसिर्जनाप्रति निराशा र उपेक्षा विद्यमान छ । यहाँको राजनीतिक व्यवस्थाप्रति उदासीनता छ ।
सिक्किमे राजनीति र नेतृत्वप्रति जुन आम-दृष्टिकोण छ, त्यसलाई बदल्न युवापुस्ताले नेतृत्व लिन जरुरी छ, जसले युवालाई संलग्न हुन अभिप्रेरित गरोस् । वर्तमान सत्ताधारी पार्टीको ‘परिवर्तन’ नामको नारा सिक्किमे जनताको साझा सपना होइन, अहिलेको सरकारको विज्ञापनमात्र हो । किनकि, त्यो सपनामा अब जनताको सहभागिता छैन, बरु सरकारको एकोहोरो प्रोपोगन्डा छ; २५ वर्षे पूर्व सरकारको पतनपछि । पहिलेको त्यो परिवर्तनको नाराले कुनै युवा-ऊर्जालाई जोड्न सकेको थिएन-कुनै उत्तराधिकारी जन्माउन सकेको थिएन । र, यो परिवर्तनको नाराले पनि युवालाई जोडन सकेको छैन । युवाको लागि बुनिएको यो नाराको कार्यान्वयनमा युवाको भूमिका खोई ? परिवर्तनमुखी सरकार बने तापनि राजनीतिमा युवाको सपनाको प्राथमिकीकरण खोई ?
आजको युवा के सोच्छ, कसरी सोच्छ अनि किन त्यसरी सोचिरहेको छ- भन्ने कुरा अबको राजनीतिको एजेन्डा बन्न जरुरी छ ! “छोग्यालको देश बस्नलायक छैन, राजनीतिप्रति रुचि छैन; जुनै दलको सरकार बने पनि सम्वृद्धि आउँदैन, गफमात्रै हो, सरकारमाथि विश्वास छैन”-यी मेरा भनाइ होइनन्, सिक्किमे युवाले व्यक्त गरिरहेका विचार हुन् । यी भावको प्रभावबारे कुनै पनि सत्ताधारी वा प्रतिपक्षी क्षेत्रीय पार्टीका नेताहरुले सोचेका होलान् !
युवा भनिएका भर्खरै सांसद बनेका इन्द्रहाङ सुब्बा, मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार श्री जेकब खालिङ, विकास बस्नेत, छिरिङ वाङचुक लेप्चा, लाक्पा तामाङ आदि पदमा पुगेर पनि परम्परागत राजनीतिक प्रणालीमै बग्न थालेपछि अहिले फेरि युवा राजनीतिबारे बहस शुरु भएको छ !
युवा पदमा पुग्ने तर परिणाम दिन नसक्ने हो भने किन युवा नेतृत्व चाहियो? भन्ने बहस महत्त्वपूर्ण बहस हो । हिजो यिनै नेता विद्यार्थी एवम् युवा राजनीतिमा रहँदा परिवर्तनको वकालत गर्ने अनि आज सत्तामा पुगेपछि त्यस्तो के भयो, जसले उहाँहरुको परिवर्तन र विद्रोही स्वभावलाई माऱ्यो ? यसमा दुइटा कारण हुन सक्छन्- पहिलो,हिजोको त्यो विद्रोही स्वभाव देखावटी थियो ! दोस्रो,विद्रोही स्वभाव हुँदै सत्तामा पुग्ने क्रमको बाटोमा सम्झौता गरियो । प्राय: नेताहरुले दोस्रो बाटो अँगाले । आज नेताहरु त्यही विद्रोही स्वभावसँग सम्झौता गरेर सत्तामा पुगेका छन्, जसले नेतृत्वलाई यो कुसंस्कारित राजनीतिको दास बनाएको छ । राजनीतिमा आफ्नो स्थान बचाइराख्न पार्टीका -अझ अहिले त गुटका- बाध्यकारी ‘ह्वीप’ लागू गराएर ‘होमा हो’ मिलाउनथाले सँगै त्यो विद्रोही स्वभावको अन्त्य भएको छ ।
राजनीतिमा युवा किन आउँदैनन् ?
राजनीतिमा युवापुस्ता किन आउन सकिरहेका छैनन् ? राजनीतिमा लहैलहै लागेर जाने युवाको संख्या उल्लेख्य भए पनि राजनीति बुझेर नै योगदान गर्न संलग्न हुनेको संख्या भने निक्कै कम छ । राजनीतिमै भएर पनि राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्नसक्ने युवा त विरलै भेटिन्छ । राजनीतिमा युवानेतृत्व स्थापित हुन नसक्नुका मुख्य तीन कारण छन् : पहिलो, स्रोत साधनमा अभाव : राजनीतिमा लाग्ने युवा कि त विद्यार्थी वा भर्खरै पेशा-व्यवसाय गर्न शुरु गरेका व्यक्ति हुन्छन् ! जीवनको यो कालखण्डमा युवाको स्रोत साधनमा पहुँच सीमित हुन्छ ।
युवाहरु आफ्नो व्यक्तिगत खर्च, राजनीतिक अभियानमा हुने खर्च र कति अवस्थामा त परिवारको आर्थिक भार पनि बेहोर्नुपर्ने अवस्थामा हुन्छन् । आम्दानी कम र दायित्व बढी हुँदा युवा आफैंलाई कसरी त्यसको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौती रहन्छ । धेरै युवाले शुरुमा राजनीतिमा हामफाले पनि आर्थिक अवस्थाकै कारण राजनीति छाड्छन् । राजनीतिलाई जागिर बनाउने युवा राजनीतिमा टिक्छन् । आफ्नो इमानलाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिलाई सेवामूलक बनाउने व्यक्ति हराउँदै जान्छन् । आज राजनीति फुलटाइम व्यवसाय जो बनेको छ ! आफ्नो काम गरेर बचेको समय राजनीतिमा योगदान गर्ने माहोल हालको राजनीतिले प्रदान गर्दैन !
चुनावमा उठ्नका लागि पैसा चाहिने अगाडि-पछाडि भूसतिघ्रे पाल्न पैसा चाहिने, चुनाव जित्न पैसा चाहिने भएपछि आज एउटा युवा आफ्नो स्वाभिमान बेचेर कसरी यो धन्दामा लाग्नसक्छ ? पढाइको तनाव, करियरको तनाव, सम्बन्ध (प्रेम वा विवाह)- को तनाव झेलिरहेका युवालाई राजनीति अनि समाजप्रति सक्रिय हुन यसै पनि त्यति सजिलो छैन ।
दोस्रो, आम दृष्टिकोण : तपाईंले एउटा बच्चालाई भविष्यमा के बन्छौ भनेर सोध्नुभयो भने ‘डाक्टर’ भन्छ, ‘इन्जिनियर’ भन्छ, ‘ब्यांकर’ पनि भन्छ । तर, नेता वा राजनीतिज्ञ कसैले भन्दैन । केही समय अघि एउटा विद्यालयमा एकजना नवनिर्वाचित मेयरले दिएको भाषण सम्झन्छु, “नगरपालिका यस विद्यालयलाई सहयोग गर्न तयार छ, ताकि यहाँका विद्यार्थी ठूलो डाक्टर, इन्जिनियर र कर्मचारी बनून् ।”
मलाई अचम्म लाग्यो । एउटा नेताले विद्यार्थीहरुलाई नेता बन भन्नसक्ने अवस्था किन छैन ? राजनीतिप्रति हाम्रो दृष्टिकोण सकारात्मक किन छैन ? नेताकै नजरमा नेता किन सम्मानित छैन ? यहाँ अहिलेका नेता नै सक्षम युवा आएर हाम्रो भाग खोस्ने हुन् कि- भन्ने डर पालेर बसेका छन् ।
उनीहरु सम्भव भएसम्म नयाँ पुस्ताले नेतृत्व लिन खोजेको देख्न चाहँदैनन् । थुप्रै युवाले आफ्नो मतदाता पत्र बनाएकै हुँदैनन् । “मेरो भोटले अर्थ राख्दैन”- भन्ने भावले युवालाई राजनीतिबाट टाढा बनाउँदैछ । जब एकजना युवाले आफ्नो संलग्नताले राजनीतिमा फरक पर्छ भनेर महसुस गर्न सक्दैन भने ऊ किन संलग्न हुने ? प्रश्न यहाँनेर आउँछ ।
अर्को कुरा, के पूर्व सरकारमा, के पवन चामलिङका मन्त्रीहरु पूर्वमन्त्री गर्जमान गुरुङ, के.टी.ग्याल्छेन, डी.टी.लेप्चा आदि लगायतका नेताले आम युवालाई प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् त ? छैनन् । म यस्तो बन्छु भनेर युवालाई राजनीतिमा लाग्न प्रेरणा दिने त्यो “रोलमोडल” नहुनुले पनि युवा राजनीतिबाट तर्किएका हुन् ।
हामी राजनीतिलाई घृणा गर्छौं । राजनीतिलाई घृणा गरेर अर्को विकल्प भए पनि ठिकै थियो । राजनीतिबाट निवृत भएका पुराना नेताहरुले जैविक खेतीपाती वा जागिर गरेर बसेका भए पनि राज्यमा एउटा उदाहरण नै बन्ने थियो । यो क्षेत्रमा लागे एकजना पूर्व क्षेत्रीय पार्टी एस.डी.एफ-का संस्थापक पूर्व-उपमुख्यमंत्री पी.टी.लक्समलाई हामीले कहिल्यै भुल्नु हुँदैन ।
अर्का प्रजातन्त्रप्रेमी, सिक्किमे माटोलाई माया गर्ने एस.डी.एफ.का संस्थापक स्व.गर्जमान राई (जी.एम.राई ) गोर्खा जातिको निम्ति मरिमिटने क्रान्तिकारी जनयोद्धा थिए । एस.डी.एफ. को परिवर्तनको नारासँगै यो दललाई सरकारमा ल्याइपुऱ्याउ जी.एम. राईको अतुलनीय योगदान थियो । अर्का योद्धा पूर्व सांसद नहकुल राई पनि हुन् । भूमिगत अवस्थामा रहेका श्री नहकुल राईले एस.डी.एफ पार्टी बनाउनमा ठूलो योगदान गरेका थिए । स्व.गर्जमान राईले एउटा अलग राजनैतिक पार्टी पनि खोलेका थिए । सिक्किम गोर्खा प्रजातान्त्रिक पार्टीबाट उम्मेदवारहरु पनि खडा गरेका थिए । सिक्किम गोर्खा प्रजातान्त्रिक पार्टी सरकार बनाउन विफल भयो । गोर्खा पार्टी चुनावमा हारे पनि नेता राई आफ्नो नीति र सिद्धान्तमा सधैं अडिग रहिरहे ।
उनले जहिल्यै पनि आफ्नो जाति र अस्मिताको कुरा गर्थे । सारा भारतमा छरिएर बसेका गोर्खा जातिलाई एकत्रित गराउने ठाउँ ‘कुञ्जी सिक्किम हो’ भन्थे । ‘यहाँ हाम्रो आफ्नै सदन छ । यहाँबाटै गोर्खा जातिलाई प्रतिनिधित्व गर्न सकिन्छ’ नेता राई भन्ने गर्थे । यस्ता जनयोद्धाको नेतृत्वलाई हामीले कहिल्यै भुल्नु हुँदैन । पवनकुमार चामलिङ खालीखुट्टेहरुको सहारा लिएर समाजवादको नारामा २५ वर्ष सरकारमा बसे तर, जातिको काम कहिल्यै गरेनन् ! बरु संघ-संस्थालाई पैसा बाँड्ने योगदान मात्रै गरे । भण्डारीको सरकार जस्तै चामलिङले पनि एकतन्त्रीय शासन चलाए । ‘डल्ले गुण्डा’को नाम दिएर प्रत्येक भूमिपूत्रको अपमान गरे । छुवाछूत र जातीय वितृष्णा पनि फैलाए । ‘हाम्रो पार्टी समर्थकले आफ्ना तीनलाख हातखुट्टाहरु क-कसको गालामा बजाउने हो, धेरैले कुटाइ खाने सम्भावना छ’ भन्नेजस्ता उडुवा कुरा गरेर पार्टी र आफ्नो समेत अपमान गरे । चामलिङले यो कुरा २०१९ को विधानसभा चुनाव प्रचारताका मञ्चबाटै बोलेका थिए ।
चामलिङ जस्ता कवि, गीतकार, लेखक र कुशल राजनीतिज्ञ, खालीखुट्टेका असल नेता भनिएका मान्छेले पनि त्यसरी आफ्ना विपक्षीहरुमाथि छल-बल प्रयोगी गरी जाइलाग्ने कुरा गर्दा हाम्रो समाजकै असभ्यता झल्किन्थ्यो । त्यसमाथि उनले भण्डारी शासनको झल्को दिँदै विपक्षी दलका नेतालाई जेल हालेर अझ ठूलो गल्ती पनि गरे । त्यसपछिको चुनावमा चामलिङ र उनको दल हाऱ्यो पनि ।
पवन चामलिङको दल र तत्कालीन सरकारले विपक्षी पार्टी सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चाको मुख्यालयमा हमला गर्ने, गाडी जलाउने जस्ता कामसमेत गऱ्यो जुन ऐतिहासिक गल्ती थियो । साँच्चै भनौं भने सिक्किमको राजनीतिमा क्रिमिनल पोलिटिक्स नै भित्रियो । तर, यसकै नतिजास्वरू प्रेमसिङ गोलेले ‘क्रान्तिकारी परिवर्तन’ को नारा लिएर नयाँ सरकार नै बनाइदिए । यद्यपि, विडम्बना-हालको राजनीति पनि गुण्डागर्दी, अपराधीकरण, भ्रष्टाचारबाट मुक्त छैन । त्यसो हुनाले राजनीतिप्रति आमनागरिकहरुको धारणा राम्रो छैन । यो अवस्थाले एउटा निराशाजनक दृष्टिकोणको विकास गराएको छ जसले खुकुरी बोकेर ज्यानको बाजी हाल्दै राजनीति किन गर्ने ? आखिर यसले नारामा भनिएको जस्तो नतिजा कहिल्यै पनि दिने होइन रहेछ-भन्नेजस्तो आमधारणा बनिरहेको छ । सबै नेताहरु भ्रष्टाचारी हुन्, अथवा राजनीतिज्ञ बन्नु भनेकै भ्रष्टाचारी हुनु हो भन्ने आमबुझाइले समाजलाई गहिरो निराशाको खाडलमा हालिरहेको छ । अबको चुनावमा मतदाताहरुको संख्या पनि धेरै प्रतिशतले घट्ने आँकलन गरिँदैछ । किनभने लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा युवा जमातले राजनीतिलाई कसरी हेर्छ-बुझ्छ भन्ने कुराले ठूलो महत्व राख्दछ !
तेस्रो, पार्टीगत संरचना: राजनीतिमा युवाहरुको उदासीनताको समस्या देखिनुमा प्रचलित रूपमा विद्यमान पार्टी संरचना र राजनीतिक संस्कारका समस्या नै मूल कारक हन् भनेर बुझ्नुपर्दछ । अहिलेका पार्टीहरु यहाँ नेता जन्माउने भन्दा पनि आफूले गरेको निर्णयमा सहीछाप ठोक्ने जमात बनाउन बढी रुचि राख्छन् । राजनीतिमा युवा लागेर, पदमा पुगेर योगदान गर्ने संरचना नै हामीले विकास गर्न सकेका छैनौं । युवा भएर अघि बढ्न कि त शीर्ष नेतृत्वको सन्तान हुनुपर्ने, कि त धेरै स्रोत-साधन चाहिने परिपाटीले निष्ठावान युवा राजनीतिमा आकर्षित छैनन् । योग्यता, क्षमता, विचार, नेतृत्वलाई प्रोत्साहित नगरेर त्यसविपरीत राजनीतिक दुरुपयोग गर्दै युवाहरुको जिन्दगी बर्बाद पार्ने परिपाटीले चलिरहेको कारण युवाहरुमा राजनीतिक मोह घटेको हो ।
आजका हाम्रा पार्टीहरुको दलीय संरचना युवामैत्री छैन । एउटा सक्षम युवालाई पार्टीमा जोडिन सजिलो छैन । आफूभन्दा क्षमता नभएको,नेतृत्व कुशलता नभएको,चाकरी गरेर नेता बनेका मानिसलाई नेता मानेर एउटा निष्ठावान युवा कसरी राजनीति गर्न सक्छ ? त्यसैले आज एउटा युवा बरु गैरराजनीतिक अभियानमा संलग्न हुन तयार छ,तर हालको परम्परागत राजनीतिमा आउन तयार छैन । तलबाट गुटको भरयाङ्ग चढेर गर्नुपर्ने राजनीतिक संरचनाले युवालाई आकर्षण गर्न सक्दैन ।
समाधानका बाटा: हामी लोकतन्त्रमा छौं, तर सिक्किमको राजनीतिले युवालाई सहभागी गराउन सकिरहेको छैन । जसले लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउँदैछ । अब युवालाई राजनीतिमा पर्याप्त भूमिका दिन सक्ने माहोल बनाउन जरुरी छ । युवाको ऊर्जाले साहस गर्छ,बुढयौलीको अनुभवले सम्झौता । अब साहस गर्न सक्ने उत्कृष्ट व्यक्तिहरु राजनीतिक नेतृत्वमा किन नआउने ? राजनीतिलाई कमाइखाने भाँडो बनाउने होइन, आफ्नो खुट्टामा उभिनसक्ने युवानेतृत्व सिक्किम आमाले खोजिरहेकी छन् ।
यसर्थ, दलीय संरचना, नीति तथा कार्यक्रमले नै युवालाई राजनीतिप्रति आकर्षण गराउन जरुरी छ । सक्षम युवालाई छात्रवृत्तिजस्तै राजनीतिक रुपमा विकास गर्न अनि आर्थिकरुपमा सहयोग गर्न अब पार्टी र राज्यका तहबाटै पहल किन नगर्ने ? अहिले युवाको दुरुपयोग गर्ने संस्कारभन्दा युवालाई सक्षम नेता बनाउने संरचना अब पार्टीभित्र किन नबनाउने ? संगठनले युवामा जति लगानी गर्छ, युवाले त्यति नै लाभ पाउँछ ।
अर्को कुरा : आज राजनीति र नेतृत्वप्रति जुन दृष्टिकोण छ, त्यसलाई बदल्न एउटा पूरै सक्षम युवापुस्ताले नेतृत्व लिनु जरुरी छ । जसले आउँदै गरेको युवालाई राजनीतिमा संलग्न हुन अभिप्रेरित गरोस् । केही वर्षदेखि राजनीति अहिंसात्मक, मूल्यमान्यता आधारित जनतामुखी अनि युवाकेन्द्रित बन्नसक्छ भनेर विवेकशील सिक्किमेली युवाले गरिरहेका कार्यक्रमहरु त्यसको उदाहरण मान्नुपर्दछ । अब प्रत्येक पार्टीमा युवालाई अगाडि बढाउने संयन्त्र नै हुनुपर्छ । युवालाई नतिजा निकाल्न र जवाफदेही हुन बढी करलाग्छ किनकि, उनीहरूलाई आफूलाई साबित गर्नुपर्ने चुनौती हुन्छ । अब शीर्ष नेतृत्व अनि संगठनको मूल्यांकन नै उसले कति सक्षम नेतृत्व जन्माउन सक्छ, त्यसमा मापन हुनेछ ।
अनि मात्रै हामीले पनि ३५ वर्षीय विपक्षी दलको नेता, ३४ वर्षीय प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, २५ वर्षीय मन्त्री पाउन सक्छौं । नत्रभने सबैकुरा नारामा नै सीमित हुनेछ ।
हाम्रो राज्यका धेरै युवाले धर्ना बसेर एकदिन मैनबत्ती बालेर, सामाजिक संजालमा ‘वाटसयाप’, हालेर पन्छिन पाउने छैनन् । फेरि परिवर्तन गर्ने र राजनीतिमा नयाँ अध्यायको शुरुवात गर्ने हो भने सक्षम युवा राजनीतिमा आउनुको विकल्प छैन ।
युवाहरु पार्टी कार्यकर्ताका रुपमा मात्र होइन, स्वतन्त्र विचार विमर्श-समूहको रुपमा सहभागी भएर मात्रै राजनीतिलाई दिशानिर्देश गर्न सकिन्छ । आफ्नो नेतृत्वप्रति जवाफदेही बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । अब पनि युवालाई अनुभवहीन भनेर पन्छाउने हो भने हामी र हाम्रो राजनीति अघि बढन सक्दैन ।
त्यसैगरी, सरकारले युवालाई राजनीतिप्रति सचेत बनाउन शिक्षाको मोडल बदल्न जरुरी छ । भोट किन महत्त्वपूर्ण छ ? राजनीतिमा चासो किन जरुरी छ? त्यो स्कूल जीवनदेखि नै बुझाउन जरुरी छ । हामीले १२ श्रेणीका विद्यार्थीको रिजल्ट लिनुअघि मतदाता कार्ड बनाउनुपर्ने नीति लागू गर्न पनि सकिन्छ, जसले विद्यार्थीलाई भोट हाल्न प्रेरित गरोस् ।
अन्त्यमा: सिक्किमको राजनीति सधैं युवाविहीन थियो भन्ने होइन । जब क्षेत्रीय पार्टीका नेताहरु नेतृत्व गर्ने – नेतृत्वमा थिए, उनीहरू ४० वर्ष मुनिकै थिए । समस्या त्यसबेला सिर्जना भयो, जब यो पुस्ताको नेतृत्वले नेतृत्व हस्तान्तरण गरेन । नेतृत्व भनेकै आफूपछिको उत्तराधिकारी नेता जन्माउनु हो । पूर्व सरकारमा एउटै नेताले चारपल्ट टिकट पाएर जिते । आज पवन चामलिङको विकल्पमा बहस हुनु , पवन चामलिङकै अक्षमता हो । अहिले पार्टीमा भएका युवा मुख्य नेतृत्वमा हस्तक्षेप गर्ने वा आफ्नो एजेन्डामा नेतृत्वलाई हिँडाउन सक्ने ल्याकत राख्दैनन् ।
६०-६५ वर्षको उमेरकाहरुले गर्ने क्रान्ति अब काम लाग्दैन । अब नयाँ युवा, तेस्रो पुस्ताले फेरि अर्को विद्रोह गर्न आवश्यक छ । हाम्रो पुस्ताले केही नेता वा पार्टी फाल्न गाह्रो छैन ।
खुला सोच, नम्रता अनि साहससहित युवाले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न जरुरी छ । अबको युवा नेतृत्वलाई अहिलेका नेतृत्वले गरेका गल्ती दोहोर्‍याउने छुट छैन । यी नेताले विकास र परिवर्तन भनेको लाइनमा रहेको पहिलो व्यक्तिका लागिमात्र हो भन्ने बुझे । त्यसैले क्रान्तिपछि नेताकै वरिपरिका मात्र सम्पन्न भए । अबका युवाले विकास लाइनको अन्तिममा रहेका व्यक्तिहरुका लागि पनि हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ । युवा नेताको काम समस्या पहिचान गर्ने वा समाधान दिने मात्र होइन, समाधान गर्न अरुलाई पनि उत्प्रेरित गर्ने हो । कुनै पनि संगठनको मेरुदण्ड त्यो संगठनको दोस्रो पुस्ताको नेतृत्व हो । संगठन मजबूत बनाउने हो भने दोस्रो तहको नेतृत्वमा प्राय: युवाकै नेतृत्व आउनैपर्छ । अहिले हाम्रो राजनीति सही दिशामा छैन । किनकि, हाम्रो राजनीतिमा युवाको भूमिका सशक्त छैन । त्यसैले अब सुसंस्कृत राजनीति र समृद्ध सिक्किमका निम्ति सक्षम युवा राजनीतिको मैदानमा उत्रनुको विकल्प छैन ।
(लेखक सिक्किममा सक्रिय पत्रकार तथा कवि हुन् । सामाजिक रूपान्तरणको पक्षमा कलम चलाउने युवराज घलेभाइ साहित्यमा पनि सक्रिय छन् । यहाँ प्रस्तुत विचारपरक लेख उनकै क्षेत्राधिकारमा प्रकाशित छ । यसमा प्रकाशनको कुनै राय समावेश छैन । –सम्पादक)